Soo Saaraha Shaxda Carruurta Yaryar ee ugu Wanaagsan | Yilibao
Miiska carruurta yaryar, oo ka samaysan waxyaabaha loo yaqaan 'PP material', waa mid ku habboon deegaanka. Miisku waa mid xoog badan oo waara, iyadoo godadka miiska labada dhinacba, loo isticmaali karo keyd ahaan.
Magaca Soo Saarka
58 * 29.5 * 20.5cm
qiyaastii 0.65 kg / cutub
Tani waa badeecad midabaysan oo loo habeeyay. Loo habeeyay iyadoo loo eegayo lambarka midabka ee uu macmiilku siiyay. Midabkiiba ugu yaraan 1000 cutub
12 cutub / kartoon;
Cabbirka kartoonka: 61 * 32.5 * 43cm
Loading Awoodda Hal Weel
Miiska carruurta yaryar, oo ka samaysan waxyaabaha loo yaqaan 'PP material', waa mid ku habboon deegaanka. Miisku waa mid xoog badan oo waara, iyadoo godadka miiska labada dhinacba, loo isticmaali karo keyd ahaan. Miiskuna waa mid yar, oo aad ugu habboon carruurta. Tani waa badeecad caan ku ah iibinta cunugga ee Yurub iyo Ameerika.
Tani waa badeecad midabaysan oo loo habeeyay. Loo habeeyay iyadoo loo eegayo lambarka midabka ee uu macmiilku siiyay. Midabkiiba ugu yaraan 1000 cutub.
Waxaan haynaa koox uqalma, waxqabad si aan u siino taageero aad u fiican macmiilkeena. Waxaan si caadi ah u raacnaa mabaadi'da macaamiisha u janjeedha, faahfaahinta-diiradda loogu talagalay Qiima-dhimista Caadiga ah ee Shiinaha XPE Isku-laabashada / Carruurta / La-laaban karo Ciyaaraha Carruurta / Ciyaaraha Ciyaaraha Ciyaaraha / XPE Puzzle / Fuulitaanka / Isku-dhafka Waxbarashada / Dabaqadda Mat Rugga Roogga, Waxaan maamuusnaa maamuleheena asaasiga ah Daacadnimada ganacsiga, mudnaanta adeegga waxaanan ku dadaali doonnaa sidii aan macaamiisheenna ugu soo bandhigi lahayn alaab tayo sare leh iyo adeeg aad u wanaagsan.
Hore: XPE Ciyaaraha aan fiicnayn ee Eco-saaxiibtinimo
Xiga: EPE Sunta aan fiicnayn ee E-saaxiibtinimada u leh Mat Mat